Archdiocese of Mandalay blog: May 2010
Myanmar - Pope establishes new diocese in Myanmar
Pope Benedict XVI has erectedanew diocese in Myanmar. The Diocese of Kalay was erected on May 22 with territory taken from Hakha diocese, making itasuffragan of Mandalay archdiocese. The Pope appointed Bishop Felix Lian Khen Thang, the auxiliary Hakha bishop, as the first Bishop of Kalay.
The new diocese is situated east of Myitkyina diocese and south of Mandalay archdiocese and Hakha diocese. Kalay diocese hasapopulation of 1.3 million, of which 49,000 are Catholics. It has 20 parishes, 26 diocesan priests, 84 Religious, 29 seminarians and 120 catechists. St Mary’s Church in Kalay will be the diocesan cathedral, according to the Holy See’s Bulletin.
မတ်လ (၂၂) ၂၀၁၀ ရက်နေ့ တွင် ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ဘက်နဒက် (၁၆) က မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဂိုဏ်းအုပ်သာသနာသစ်တစ်ခုကို ကြော်ငြာခဲ့ပါသည်။ံ မြန်မာနိုင်ငံ ကက်သလစ်ဂိုဏ်းအုပ်/ဂိုဏ်းချုပ် သာသနာများထဲတွင် ဟားခါးသာသနာမှ ကလေးကက်သလစ် ဂိုဏ်းအုပ်သာသနာသစ် တစ်ခုကို ခွဲထုတ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဂိုဏ်းအုပ်/ချုပ်သာသနာသစ်တစ်ခု အဖြစ် တရားဝင် တည်ထောင်ပေးခဲ့ပါသည်။ ယခု ကလေးကက်သလစ်ဂိုဏ်းအုပ်သာသနာ အသစ်၏ ဆရာတော်ကို ဟားခါးလက်ထောက်ဆရာတော် Bishop Felix Lian Khen Thang အား ကလေးဂိုဏ်းအုပ်ဆရာတော်၏ ပထမဆုံးသော ဆရာတော်အဖြစ် ခန့်အပ်ခဲ့ပါသည်။
ကလေးကက်သလစ်ဂိုဏ်းအုပ်သာသနာ အသစ်သည် အရှေ့ဘက်တွင် မြန်ကြီးနားဂိုဏ်းအုပ်သာသနာ၊ တောင်ဘက်တွင် မနလေး ဂိုဏ်းချုပ်သာသနာနှင့် ဟားခါးသာသနာဂိုဏ်းအုပ်သာသနာတို့ တည်ရှိပါသည်။ ကလေးဂိုဏ်းအုပ်သာသနာသစ်တွင် လူဦးရေ 1.3 မီလီလျံတွင် ကက်သလစ်ဘာသာဝင်ဦးရေ 49000 ယောက်ရှိပြီး ဘုန်းတော်ကြီး 20 ပါး၊ သာသနာအုပ်စု ၂၆ အုပ်စု၊ သီလရှင် ၈၄ ပါး၊ ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်းသား 29 ဦးနှင့် Catechist အဖွဲ့ဝင် 120 ဦးရှိပါသည်။ ကလေးမြို့ရှိ စိန်မေရီ ဘုရားကျောင်းကို ကယ်သီဒယ် အဖြစ်ထားရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း The Holy See စာစောင်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
Posted by Archdiocese Of Mandalay Blog at 6:48 PM
သတိပြုလေ၊ ချစ်မိတ်ဆွေ။ ။
သင်တို့ပိုင်ဆိုင်သော အရာများကိုရောင်းချ၍ ပေးကမ်း စွန့်ကြဲကြလော့။ မဟောင်း မဆွေးနိုင်သော ပိုက်ဆံအိတ်ကို လည်းကောင်း သူခိုးလည်းမခိုးနိုင်၊ ပိုးလည်းမဖေါက်နိုင်၊ ကုန်ခန်းခြင်းလည်း မရှိနိုင်သော ကောင်းကင်ဘဏ္ဍာကို လည်းကောင်း ရှာဖွေစုဆောင်းကြလော့။
(လုကာ - ၁၂း၃၃)
Posted by Archdiocese Of Mandalay Blog at 4:07 AM
ကျောက်သံထွင်းထု --- ပုတီးတု။
---- တရားမှတ်ကာ ပွါားပါလေ။
"ဂျိုဆေမာရီယာ အက်စ်ခရီးဗာ" သူဟာ ရဟန်းဘုန်းတော်ကြီး တစ်ပါးပါ။ စစ်ပြေးဒုက္ခနဲ့ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခဲ့သူဖြစ်သလို ကမ္ဘာအနှံ့ခြေဆန့် သွားလာခဲ့သူလည်းဖြစ်တယ်။ ရှေ့နေလည်း လုပ်ဖူးသလို စာများစွာ ရေးသားထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ စာရေးဆရာတစ်ဦး လည်းဖြစ်တယ်။ ဆောက်လုပ်ရေး ဗိသုကာပညာကို နှစ်သက်ပြီး ဂီတကိုလည်း မြတ်နိုးသူပါ။ မြို့ပြကို ခင်တွယ်တတ်သလို ကျေးလက်တောရွာမှာလည်း ပျော်ရွှင်စွာ နေထိုင်တတ်တဲ့ ရဟန်းတစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို သူ့ရဟန်းဘ၀ကို အသားပေးတင်ပြခြင်းကတော့ သူ့လို ရဟန်းတစ်ပါးရဲ့ ဘ၀အခြေအနေကသာ ရဟန္တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ မီးမောင်းထိုးပြချင်တာမျိုး မဟုတ်ဘဲ၊ သာမန်လူဘယ်သူမဆို ရေပိုက်ပြင်သမားပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လျှပ်စစ်ပြင်သမားပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ အိမ်ဆောက်သူ၊ ရှေ့နေ၊ ဈေးသည်၊ ကျောင်းသား၊ အိမ်ဖော်၊ အိမ်ထောင်သည်၊ လူလွတ်ဘယ်လိုလူမျိုးပဲဖြစ်စေ ကမ္ဘာပေါ်မှာ နေထိုင်သွားလာ လှုပ်ရှားရင်းနဲ့ သူတို့ရဲ့ လုပ်သမျှအလုပ်လေးတွေကို ဘုရားသားသမီးတွေအနေနဲ့ ဖြည့်ဆည်းသွားကြရင် အားလုံးသောသူတိုင်း ရဟန္တာဖြစ်နိုင်ကြတယ် ဆိုတာပါပဲ။
ဂျိုဆေမာရီယာ အက်စ်ခရီးဗာက အလုပ်လုပ်ရတာ သိပ်ကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့သူပါ။ အကျိုးအမြတ်ကို တွက်ချက် ရည်မှန်းပြီးလုပ်တဲ့ လုပ်ငန်းသဘောမျိုးတော့ လုံးဝ မဟုတ်ပါဘူး။ "နေ့စဉ် လုပ်သော အလုပ်များအားဖြင့် သန့်ရှင်းစင်ကြယ်သော ဘ၀ရနိုင်ခြင်း" ဆိုတဲ့ ဂျိုဆေမာရီယာအက်စ်ခရီးဗာရဲ့ ဆိုလိုရင်းက "အလုပ်တစ်ခုကို လူသားတစ်ဦးရဲ့ ဥာဏ်ကုန်သုံးပြီး အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်။ အဲဒီလို အလုပ်မျိုးကို ဘုရားဂုဏ်တော်အတွက် ပူဇော်ပြီး လူသားကောင်းကျိုးအတွက် အသုံးတော်ခံမယ်" ဆိုတဲ့ ပုံစံနည်းလမ်းနဲ့ပါ။ သူ့ရဲ့ဘ၀ပေးတဲ့ သင်ခန်းစာကတော့ အသေခံစရာမလိုဘဲ၊ ခြင်္သေ့လှောင်အိမ်ထဲ ပစ်ထည့်မခံရဘဲ၊ ရသေ့ကျောင်းမှာ နံရံအလုံပိတ် တရားမကျင့်ဘဲနဲ့လည်း
- နေ့တိုင်းလုပ်နေကျ အလုပ် လုပ်ရင်း
- ကိုယ့်တာဝန်ကို အချိန်မီပြီးစီး အောင်လုပ်ရင်း
- တံမျက်လှည်း၊ ကလေးအနှီး လျှော်၊ ဈေးရောင်းရင်း၊
- ညှိုးငယ်နေတဲ့သူကို အပြုံးလေးတစ်ချက်နဲ့အားပေးရင်း ရဟန္တာဖြစ်နိုင်ကြတယ် ဆိုတဲ့ အချက်ပါ။
သူ့အဆိုတစ်ခုက "သေးငယ်တဲ့ အရာတွေကို အချစ်ကြီးကြီးနဲ့ လုပ်လိုက်တဲ့အခါ ဘုရားရှေ့တော်မှာ ကြီးကျယ်တဲ့ အရာတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်" တဲ့။ သူဟာ ဘုရားကိုချစ်သလို ကမ္ဘာကြီးကိုချစ်တဲ့သူပါ၊ သူ့လိုပဲ လုပ်ကြလို့ပြောလေ့ရှိပါတယ်။ လုပ်ငန်းမျိုးစုံလုပ်နေတဲ့ လူဝတ်ကြောင်တွေကို ဂျိုဆေမာရီယာအက်စ်ခရီးဗာ အားပေးတိုက်တွန်းလေ့ရှိတဲ့ စကားက "လုပ်ငန်းခွင်မှာဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်နေရာမှာဖြစ်ဖြစ် ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ၊ မိတ်ဆွေတွေ၊ အမျိုးတွေနဲ့ရင်ဘောင်တန်းပြီး အတူတကွ လှုပ်ရှားနေကြရင်း သူတို့ စိတ်ဝင်စားစရာလေးတွေကို ပြောဆိုရင်း သူတို့ကို ခရစ်တော်နဲ့ပိုနီးလာအောင် လုပ်ဆောင်ကြရမယ်။ အရင်ဆုံးတော့ သင့်ရဲ့စရိုက်၊ အမူအကျင့်နဲ့ အရင်ဟောပြီး နောက်မှ နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ ဟောကြားပါ။ လူဝတ်ကြောင်တွေဟာ နေရာတကာ ထိုးဖောက်နိုင်တဲ့ သာသနာပြုတွေ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့" ဆိုတာပါပဲ။ လူဝတ်ကြောင်တွေကို အတွင်းစိတ်နဲ့ ဆုတောင်းတတ်ဖို့၊ နေ့စဉ်မစ္ဆားနာယူဖို့၊ အာပတ်မှန်မှန်ဖြေဖို့၊ နှုတ်ကပါတ်တော် ကျမ်းစာဖတ်ရှုဖို့စတဲ့ ခရစ်ယာန်ကျင့်စဉ်များကို လုပ်နိုင်သမျှလုပ်ဖို့လည်း အားပေးကူညီလေ့ရှိပါတယ်။ ဂျိုဆေမာရီယား အက်စ်ခရီးဗာဟာ လူတွေဆီက ကြီးကျယ်ပြင်းထန်တဲ့ စွန့်လွှတ်ခြိုးခြံမှုတွေ မတောင်းဆိုပါဘူး။ လုပ်တတ်ရင် မြတ်တယ်ဆိုသလို ပေးဆပ်တဲ့ အသက်တာမျိုးကို မိမိတို့လုပ်သမျှ သေးငယ်တဲ့ ခြိုးခြံခြင်းများအားဖြင့် ရရှိနိုင်ကြပါတယ်လို့ ပြောလေ့ရှိပါတယ်။ ဥပမာ - "ကျလာတဲ့ တာဝန်ကိုကျေအောင် ဆောင်ရွက်လိုက်ခြင်း၊ သူများအတွက် စိတ်သက်သာရာရစေတဲ့ ဆက်ဆံမှုပေးခြင်း၊ စားသောက်တဲ့အခါ မသိမသာအနည်းငယ် ခြိုးခြံမှုပြုခြင်း၊ နည်းနည်းပါးပါး စွန့်ကြဲပေးကမ်းခြင်း၊ အနည်းအကြဉ်းသော အပျော်အပါးအချို့ကို စွန့်ပယ်ချုပ်တီးခြင်း၊ စတာတွေလောက်ပါပဲ" လို့အကြံပေး တိုက်တွန်းလေ့ရှိသူပါ။
ဂျိုဆေမာရီ အက်စ်ခရီးဗာရဲ့ ဘ၀ခရီးစဉ်အကျဉ်းကတော့
- ၁၉၀၂ - ဇန်န၀ါရီလ ၉-ရက် နေ့၊ စပိန်ပြည် ဘာဘာစ်ထရိုမြို့မှာ မွေးဖွားပြီး၊
- ၁၉၁၂ - မှာ ပထမကိုယ်တော်မြတ်ယူခဲ့၊
- ၁၉၂၂ - မှာ ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်းဝင်ခဲ့၊
- ၁၉၂၅ - မတ်လ ၂၈-ရက်၊ ရဟန်းသိက္ခာခံယူခဲ့၊
- ၁၉၂၇ - မှာ ရဟန်းဘ၀နှင့်ပင် တရားဥပဒေဆိုင်ရာ ဒေါက်တာဘွဲ့ရအောင်ယူခဲ့၊
- ၁၉၂၈ မှာ ရဟန်းဘုန်း တော်ကြီး အသင်းအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်သော (Opus Dei) ကို တည်ထောင်ခဲ့၊
- ၁၉၃၆ - မှာ စပိန်ပြည်တွင်း စစ်ဖြစ်ကာ အသင်းတော်ကို (အထူးသဖြင့်) ရဟန်းတွေကို လိုက်လံချေမှုန်းခြင်း ပြင်းထန်နေချိန်၍ စစ်ပြေးအဖြစ်ပုန်း ရှောင်နေရင်း ရဟန်းတာဝန်များ တက်ကြွစွာထမ်းဆောင်ခဲ့၊
- ၁၉၄၆ - မှာ ပေါ်တူဂီ၊ အီတလီ၊ ဗြိတိန်၊ အမေရိကသို့တိုင်ကျယ်ပြန့်လာသော Opus Dei လုပ်ငန်းများပိုမို ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ရောမမြို့သို့ ပြောင်းရွှေ့လာပြီး စွမ်းစွမ်းတမံတာဝန်ထမ်းဆောင်နေခဲ့ရင်း
- ၁၉၇၅ ဇွန်လ ၂၆- ရက်နေ့ အသက် (၇၃) နှစ်အရွယ်တွင် ရောမမြို့၌ပျံလွန်ခဲ့။
၁၉၇၅ မှ ၁၉၈၁ တိုင်အောင် ဂျိုဆေမာရီယာ အက်စ်ခရီးဗာအား ရဟန္တာတင်မြှောက်နိုင်ဖို့ အဆိုကို သီလရှင်အသင်းဂိုဏ်းများမှ အကြီးအကဲ (၄၁) ပါး၊ ဆရာတော် (၉၈၇) ပါး၊ ဂိုဏ်းချုပ်ဆရာတော် (၂၄၁) ပါး၊ ကာဒီနယ် (၆၉) ပါး အပါအ၀င် လူပေါင်း (၆၀၀၀)ခန့်တို့မှ ရဟန်းမင်းကြီးထံ တောင်းခံတင်သွင်းခဲ့ကြတယ်။ ၁၉၈၁ - ခုနှစ်မှာ ရဟန်းမင်း ကြီးက ရဟန္တာတင်မြှောက်နိုင်ဖို့ လုပ်ငန်းစဉ်ကို စတင်စုံစမ်းဖော်ထုတ်စေပြီး ၁၉၉၂-၂၀၀၁ အတွင်း ဂျိုဆေမာရီယာ အက်စ်ခရီးဗာပြခဲ့တဲ့ တန်ခိုးလက္ခဏာများကို အသင်းတော်ကနေ အတည်ပြုပေးခဲ့တဲ့ နောက်ရဟန်းမင်းကြီး ဒုတိယမြောက် ယောဟန်ပေါလူးကနေ ရောမမြို့၊ စိန်ပီတာရင်ပြင်မှာ ဂျိုဆေမာရီယာ အက်စ်ခရီးဗာကို သူတော်စင်ဖြစ်တယ်လို့ ကြေညာတာကတော့ ၁၉၉၂ ခု၊ မေ ၁၇ ရက်နေ့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျိုဆေမာရီယာ အက်စ်ခရီးဗာကို ရဟန္တာတင်မြှောက်နိုင်စေတဲ့ တန်ခိုးလက္ခဏာများအနက် တစ်ခုကတော့ ဆရာဝန်များ လက်လွှတ်ထားရတဲ့ အိပ်စ်ရေးရောင်ခြည် ထိတွေ့မှုများလွန်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ စပိန်ပြည်က အရေပြားရောဂါသည် "မဲန် နျူယယ်နေဗာဒိုရေး"ရဲ့ ရောဂါကို ချက်ချင်းပျောက်သွားစေခဲ့တာ အပါအ၀င်ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၀၂ - ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၆- ရက်မှာတော့ စိန်ပီတာရင်ပြင်ကနေပဲ ရဟန်းမင်းကြီး ဒုတိယမြောက် ယောဟန်ပေါလူးဟာ ဂျိုဆေမာရီအက်စ်ခရီးဗာကို ရဟန္တာတစ်ပါးအဖြစ် တင်မြှောက်ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ ဂျိုဆေမာရီယာ အက်စ်ခရီးဗာကို ရဟန္တာတင်မြှောက်ခြင်းအခမ်းအနားမှာ နိုင်ငံပေါင်း ၈၄- နိုင်ငံလောက်က လူပေါင်း သုံးသိန်းခန့် ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်။ ရဟန္တာဂျိုဆေမာရီယာ အက်စ်ခရီးဗာဟာ ရဟန်းမင်းကြီး ဒုတိယမြောက်ယောဟန် ပေါလူးက တင်မြှောက်ခဲ့ပြီးတဲ့ ရဟန္တာ ပေါင်း ၄၆၅ - ပါးထဲက၊ ၄၈ - ပါးမြောက် ရဟန္တာဖြစ်ပါတယ်။
ဂျိုဆေမာရီယာ အက်စ်ခရီးဗာ ကနေ ၁၉၂၈ - ခုနှစ်မှာ စတင်ဖွဲ့စည်း တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ Opus Dei ဘုန်းတော်ကြီး အသင်းတော်အဖွဲ့ရဲ့ အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ လုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးလုပ်ရတဲ့ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတွေဟာ သန့်ရှင်းခြင်း ဘ၀တာရစေဖို့ ဘုရားကခေါ်တယ်ဆိုတာကို ဘ၀မှာ ထင်ထင်လင်းလင်း သတိထားမိလာစေဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ မိမိတို့ ကျရာတာဝန် ထမ်းဆောင်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ လူမှုနယ်ပယ်ဒေါင့်အသီးသီးမှာ ထိုးဖောက်ပြီး ဧ၀ံဂေလိတရားနဲ့ မိမိရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကို ဖြန့်ဝေကြစေဖို့ပါ။ Opus Dei ဘုန်းတော်ကြီးအသင်းဂိုဏ်းဟာ လူဝတ်ကြောင်တွေလည်းပါဝင်နိုင်တဲ့ အသင်းအဖွဲ့တစ်ခု ဖြစ်တာကြောင့် Opus Dei အသင်းဂိုဏ်းဟာ လူဝတ်ကြောင်တို့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းကြီး တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Opus Dei ဆိုတာ လက်တင်စကားလုံး ဖြစ်ပြီး "ဘုရားရဲ့လုပ်ငန်း"လို့ အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ ဂျိုဆေမာရီယာ အက်စ်ခရီးဗာရဲ့ အကြံပေးချက်တွေကဖြင့် အလုပ်ရှုပ်လွန်းလို့ တရားဟောဖို့၊ ဘုရားရှိခိုးဖို့၊ သက်သေခံဖို့တွေ မလုပ်အားပါဘူးလို့ ဆင်ခြေတက်တတ်တဲ့ ဒီခေတ်ရာစုလူသားတွေအတွက် ဖြေဆေးတစ်ဆူပင် ဖြစ်နေပါတယ်။ ဂျိုဆေမာရီယာအက်စ်ခရီးဗာပြောသလို ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာ လူတိုင်းသန့်ရှင်းတဲ့ ရဟန္တာဖြစ်ဖို့ ဘုရားကထားရှိရခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာ ဟာလည်း အင်မတန်စူးရှတဲ့ အလင်းတန်းတစ်ခုနဲ့ ညွှန်ပြနေခြင်းပါပဲ။ အချိန်တိုင်း နေရာတိုင်းမှာ အသေးငယ်ဆုံးသော အရာကစပြီး အကောင်းဆုံး လုပ်သွားကြခြင်းအားဖြင့် အမှန်တကယ်ပင် သင်နဲ့ကျွန်ုပ်တို့ဟာ ရဟန္တာလောင်းများဖြစ်ကြတယ် ဆိုတာ ယုံကြည်ဝံ့စေပါတယ်။
ဂျိုဆေမာရီယာ အက်စ်ခရီးဗာနဲ့ တွေ့ဆုံဖူးသူတွေရဲ့ ရင်ဖွင့်သံများကလည်း စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။ နယူးယောက်မြို့သူ ဂျင်နီမာရေးရဲ့ ပြောပြချက်က "ဂျိုဆေမာရီယာ အက်စ်ခရီးဗာရဲ့ သြ၀ါဒတွေ၊ သူရေးတဲ့စာအုပ်တွေအားဖြင့် ဘုရားသခင်ဟာ ကျွန်မတို့ ကမ္ဘာမြေပေါ် မှာ လူသားတစ်ဦးစီတိုင်းအတွက် စောင်မစောင့်ရှာက်ပေးနေသော အလွန်ချစ်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ ဖခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ လုံးဝ သိလာရပါတယ်။ အမှန်ပဲ ဘုရားသခင်ဟာ ကျွန်မတို့ကို တစ်ဦးတည်းသော သားသမီးကို ချစ်သလိုချစ်တာပါ။ အဖဘုရားဟာ ကျွန်မတို့သားသမီးများအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်စေဖို့သာ လိုလားတော်မူတယ် ဆိုတာတွေကို သိနားလည်လာတာ၊ ကျေးဇူးတင် နှစ်သက်လာရတာကတော့ ဂျိုဆေမာ ရီယာအက်စ်ခရီးဗာကြောင့်ပါ" လို့ဆိုပါတယ်။ Dia Boyle ကတော့ "ကျွန်မကို တွေ့တွေ့ခြင်းပဲ ဂျိုဆေမာရီယာအက်စ် ခရီးဗာဟာ မယုံနိုင်စရာကောင်းလောက်အောင် လေးနက်တဲ့အမူအရာနဲ့ ကျွန်မအပေါ် စူးစိုက်ကြည့်ပြီး (မင်းကို ဘုရားသခင်က ဒီကမ္ဘာမြေပေါ်မှာ ချောမောတင့်တယ်သူ၊ အောင်မြင်တဲ့ စွမ်းဆောင်နိုင်သူ ဖြစ်ရုံမျှအတွက်ရှိနေစေတာ မဟုတ်ဘူးနော်)လို့ ပြောပါတယ်။ သူဆိုလိုဟန်ရှိတာက မင်းဟာ ဘုရားရဲ့သမီးဖြစ်တယ်။ ဒီကမ္ဘာမြေပေါ်မှာ ကောင်းတဲ့သူဖြစ်ဖို့၊ သူတော်စင်ရဟန္တာဖြစ်ဖို့ ရှိနေတာဖြစ်တယ်လို့ ကျွန်မဒီလို နားလည်ခံယူလိုက်ပါတယ်" လို့ပြောပြတယ်။
နောက်တစ်ယောက်က Paul Barbara ဆိုသူပါ။ လော့စ်အိန်ဂျယ်မှာ နေထိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။ "ကျွန်တော်ဟာ မီးသတ်သမားတစ်ယောက် အနေနဲ့အထိတ်တလန့် အခြေအနေတွေ၊ အနာတရဖြစ်နေသူတွေ၊ အသက်ငင်နေတဲ့ သူတွေ စတဲ့ အရေးပေါ် ကိစ္စတွေအတွက် အမြဲစေလွှတ် ခံရလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီလို လူတွေကို နှစ်သိမ့်ဖို့ရန်မှာ ကျွန်တော့်အဓိက တာဝန်လို့ ခံယူပြီး အတတ်နိုင်ဆုံး ကူညီအားပေးတယ်။ အတွင်းစိတ်ထဲကနေ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အလားအလာ မကောင်းတဲ့အခြေအနေ တွေ့ကြုံချိန်မှာ ပိုဆုတောင်းပေးမိပါတယ်။ ကျွန်တော်ဒီလို လုပ်တတ်လာတာကတော့ Opus Dai အသင်းဂိုဏ်းတည်ထောင်သူ ဂျိုဆေ မာရီယာအက်စ်ခရီးဗာရဲ့ သွန်သင်သတိပေးမှုတွေကြောင့်ပါ။ သူဟာ ကျွန်တော်တို့ကို ဆုတောင်းခြင်းမှာ အားကိုးစေတယ်။ မယ်တော်နဲ့ ကောင်းကင်တမန်တော်တွေ ရဲ့ စောင့်ရှောက်ပေးမှုကိုလည်း တောင်းခံတတ်လာစေပါတယ်"လို့ သက်သေခံပြောဆိုခဲ့သူပါ။
ချီကာကိုမြို့သူ Julie Koening ကနေ ပြောပြတာက "Opus Dei အသင်းဂိုဏ်းနဲ့ ဂျိုဆေမာရီယာအက်စ်ခရီးဗာဟာ ကျွန်မဘ၀ရဲ့ အပိုင်းကဏ္ဍတစ်ခု ဖြစ်လာရခြင်းကတော့ ကျွန်မရဲ့ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ဟာ သူနဲ့အတူ အဲဒီဘုန်းတော်ကြီးတွေနဲ့ ဥပုသ်စောင့်ရာမှာ ပါဝင်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ရာကစပါတယ်။ ဒီအသင်းရဲ့ ပြုပြင်ပုံသွင်းပေးတဲ့ သင်တန်းသဖွယ်ဖြစ်တဲ့ ပို့ချချက်၊ ဥပုသ်ဆောက်တည်မှု၊ ဘုရားနဲ့ပေါင်းစပ်စေခြင်းစတဲ့ ၀ိညာဉ်ရေးကျင့်စဉ်တွေဟာ ကျွန်မကို ဘ၀ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းအခြေအနေတိုင်းမှာ ဘုရားကို နေရာပေးတတ် လာစေတယ်။ ကျွန်မဟာ တနင်္ဂနွေဝတ်ကျေရုံ ခရစ်ယာန်တစ်ယောက် မဟုတ်တော့ပါဘူး"လို့ ပြောပြပါတယ်။
နယူးယောက်မြို့တော်က Dodie Briggs ကလည်း "ဒီအသင်းဂိုဏ်းကို ကျွန်မကြိုက်နှစ်သက်ရခြင်းရဲ့ အဓိကအချက်ကတော့ သူရဲ့ကျင့်စဉ်ဟာ သိပ်လက်တွေ့ဆန်လို့ပါပဲ။ ကျွန်မထင်ပါတယ်၊ လူတွေဟာ အမှန်တော့ သိပ်ကောင်းချင်ကြတာပါ။ ဒါပေမဲ့ရိုးစင်းတဲ့ နည်းလမ်းနဲ့ကောင်းလာနိုင်ကြတဲ့နည်းကို မသိကြလို့ပါ။ ဘုရားတရားရှိဖို့၊ ဖြောင့်မှန် စာနာတတ်ဖို့ဆိုတာတွေကို သီးခြားတိကျတဲ့ လမ်းညွှန်ချက်များ ဒီနေရာက ပြသပေးနေပါတယ်။ အကယ်၍ ဘာမှမလုပ်နိုင်တဲ့သူတောင်မှ ဒီအကြောင်းကို အခြားလူတွေအား ဝေငှပြောပြတာမျိုး လောက်တော့ လုပ်နိုင်ကြပါလိမ့်မယ်" လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
Orange ခရိုင်မှာ နေထိုင်တဲ့ "လော်ရီ မောစ်လေ"ရဲ့ ပြောပြချက်ကလည်း တစ်မျိုးထူးခြားပါတယ်။ "ဂျိုဆေ မာရီယာအက်စ်ခရီးဗာဟာ ကျွန်တော့်ဘ၀မှာ အတော်ကို ထင်ထင်ရှားရှား သြဇာလွှမ်းခဲ့သူပါ။ သာမန် လုပ်ရိုးလုပ်စဉ် အရာတွေအားဖြင့် ရဟန္တာဘ၀ကို ရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ သူ့ရဲ့သတင်းစကားကို ကျွန်တော်ပထမဆုံး အကြိမ်ကြားရတာ လွန်ခဲ့တဲ့(၇)နှစ်လောက်ကပါ။ အဲဒီအချိန်မှာ ကျွန်တော်ဟာအသင်းတော် အပြင်ဖက်ကို လမ်းလွဲနေချိန်ပေါ့။ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ဆီက ဂျိုဆေမာရီယာ အက်စ်ခရီးဗာရဲ့ လမ်းစဉ်ကိုသိခွင့်ရပြီးနောက် မကြာခင်မှာပဲ ကျွန်တော်ဟာကက်သလစ်ကျင့်စဉ်ကို စောင့်ထိန်းလိုက်နာတဲ့ ဘာသာဝင်တစ်ဦးဘ၀ ပြန်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ဂျိုဆေမာရီယာအက်စ်ခရီးဗာရဲ့ သာမန်အလုပ်လေးတွေကို ဘုရားဂုဏ်တော်အတွက် ရည်ရွယ်လုပ်ဆောင်ခြင်းဆိုတဲ့ အညွှန်းဟာ တကယ် လက်ဆုပ်လက်ကိုင်ရှိတဲ့နည်းပါ။ အဲဒါကပဲ ကျွန်တော့်ဘ၀ရဲ့ ကျင့်စဉ်ဖြစ်လာပါတော့တယ်" သက်သေခံခဲ့ပါတယ်။ ဂျိုဆေမာရီယာ အက်စ်ခရီးဗာကို ရဟန္တာတင်မြှောက်တဲ့နေ့မှာ ကာဒီနယ်လ် ဂျိုးဇက်ရက်ဇင်းဂါး (ယခုလက်ရှိ ပုပ်ရဟန်း မင်းကြီးဘယ်နဒိတ် ၁၆)က "သန့်ရှင်းမြင့်မြတ်တယ်ဆိုရာမှာ သူများထက် သာလွန်ကောင်းမွန်ခြင်းလို့ မဆိုလိုပါဘူး။ ရဟန္တာများကလည်း အားနည်းယိမ်းယိုင်တဲ့ သူဖြစ်ချင်ဖြစ်နေမယ် သူ့ဘ၀မှာ အပြစ်အမှားများစွာ ရှိချင်ရှိနေပါမယ်။ သန့်ရှင်း မြင့်မြတ်သူဖြစ်ရခြင်းကတော့ ဘ၀ရဲ့ အဆိုးအကောင်းတွေမှာ ဘုန်းတော်ရှင်ရဲ့ အလိုတော်ကို နာခံလိုက်လျှောက်ရင်း ဘုရားရှင်ရဲ့ မိတ်ဆွေအဖြစ် တည်ဆောက်ကြခြင်းရဲ့ နက်နဲတဲ့အချက် တစ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်"လို့ မှတ်ချက်ချခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီနေ့မှာပဲ ရဟန်းမင်းကြီး ဒုတိယမြောက်ယောဟန်ပေါလူး ထုတ်ဖေါ်ပြောကြားတာက "ကျွန်ုပ်တို့ဟာ ကျွန်ုပ်တို့ လုပ်ကိုင်ထိတွေ့ မြင်နေရတဲ့အရာတွေအားဖြင့် မမြင်မထိတွေ့နိုင်သော ဘုရားကို ရှာတွေ့ရမယ်လို့ ဂျိုဆေမာရီယာအက်စ်ခရီးဗာ အသက်ရှင်စဉ်က ကျွန်ုပ်နဲ့စကား စမြည်ပြောဆိုရင်း ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်" လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီအချက်ကဖြင့် ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်း ကမ္ဘာကြီးလျှံထွက်မတတ် တီထွင်တိုးတက်နေတဲ့နောက်ကို အမီပြေးလိုက်နေကြရတဲ့ ဒီနေ့ခေတ် လူတွေအတွက် ဘုရားဆီ ချဉ်းကပ်ရန် အခြေခံကျလွန်းအောင်ကောင်းနေတဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုကို ဂျိုဆေမာရီယာ အက်စ်ခရီးဗာက ညွှန်ပြနေခြင်းပါပဲ။ ဂျိုဆေမာရီယာ အက်စ်ခရီးဗာ ရေးသားခဲ့တဲ့ မြောက်များစွာသော လူ့စိတ် ၀ိညာဉ်များကို ထိတွေ့ပြောင်းလဲစေနိုင်အောင် လေးနက် အစွမ်းထက်တဲ့နည်းကောင်း လမ်းညွှန်အဖြစ် The Way of the Cross, Furrow, The Forge, The Way, Christ is passing by နဲ့ In love with the Church ဆိုတဲ့ စာအုပ်တွေအားဖြင့် ခေတ်သစ်ရဟန္တာဖြစ်နည်းကို ဆက်လက်ပြောပြနေဆဲပင် ဖြစ်ပါတယ်။
- Inside the Vatican. Nov, 02
- "Introducing the Church's Newest Saint"
- (Opus Dei) ကို ဆီလျော်အောင်ပြန်ဆိုပါသည်။
Posted by Archdiocese Of Mandalay Blog at 5:29 AM
ခေါ်တော်မူခြင်း ဆိုသည်မှာ ဘုရားသခင်၏ ဖိတ်ခေါ်သံကို ကြားရပြီး ကိုယ်တော်နောက်ကို လိုက်ခြင်းဖြစ်၏။ ကိုယ်တော်က မည်သူမဆို ငါနောက်သို့ လိုက်လိုလျှင် မိမိကိုယ်ကိုငြင်းပယ်စေ၊ မိမိ လက်ဝါးကားတိုင်ကိုလည်း နေ့စဉ်ထမ်းယူ၍ ငါနောက်သို့လိုက်စေ (လုကာ ၉း၂၃) လို့ ဖိတ်ခေါ်ထားပါသည်။
Seminary ဟုခေါ်သော ပျိုးခင်းကို ၀င်ရောက်လာသောအခါ မိမိကိုယ် ငြင်းပယ်ရမည်၊ ကျောင်း၏ စည်းကမ်း ဥပဒေများကို လိုက်နာရမည်၊ ရဟန်းဖြစ်လိုသော ကျောင်သားသည် စာကြိုးစား၊ ၀ိညာဉ်ရေးကြိုးစား၊ ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်၊ လိမ္မာရေးခြားရှိသူ ဖြစ်ရမည်။
တချို့မှာ မိဘဖြစ်သူက ရဟန်းဖြစ်လိုသည်။ သားဖြစ်သူက မကြိုးစား။ မိဘကြောက်လို့ နေသူမျိုး ရှိနေပါသည်။ တချို့မိဘများ ကိုယ့်သားပြောတာကို အကြွင်းမဲ့ ယုံကြသည်။ ပျိုးခင်းတာဝန်ခံကို မလေးမစား ပြစ်တင်ပြောဆိုသည်။ ရဟန်းဖြစ်လိုသော ကျောင်းသားသည် အခြေခံ မကောင်းခဲ့တာ အကြောင်းပြ၊ ဖျင်းတာထက် ပျင်းတာကများသည်။ အပြင်ထွက် လည်ချင်သည်၊ VCD အမြဲ ကြည့်ချင်သည်။ ကောင်းကောင်း စားချင်သည်။
လက်ရှိ ခေတ်အပြင် ဘော်ဒါကျောင်းများ၏ စည်းကမ်းရှိမှု၊ ကြိုးစားအားထုတ်မှု ထက်မသာလွန်သည့် ရဟန်းဖြစ်လိုသော ပုဂ္ဂိုလ်သည် အချည်းအနှီးသာဖြစ်ရ၏။ ခေါ်တော်မူခြင်း မရှိ၍ ပြန်လွှတ်ခံရသော် ပျိုးခင်တာဝန်ခံများသည် ရင်နှင့် မဆံအောင် ပြောဆို ပြစ်တင်သံများကြားရ၏။ ပျိုးခင်တာဝန်ခံသည်လည်း ဥယျာဉ်မှူး ဖြစ်တာကြောင့် ပြုစုပျိုးထောင်လိုက်ရသော ပန်းကလေးများ လန်းဆန်း စေချင်ပါသည်။ ပျိုးခင်းတာဝန်ခံသည် ရဟန်းဖြစ်လိုသော ကျောင်းသား၏ ပညာရေး၊ ၀ိညာဉ်ရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ စိတ်ဓာတ်ရေးရာများကို အတူသွားလာ နေထိုင်ခြင်းဖြင့် အခြေအနေအရပ်ရပ်ကို သိနိုင်ပါသည်။ အရမ်းမဲ့ စီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းမျိုး မဟုတ်ဘဲ သုံးသပ် လုပ်ကိုင်ရပါသည်။
ဆရာတော်တစ်ပါး၏ တစ်ခုသော မိန့်ခွန်းအရ ရဟန်းလောင်းတစ်ဦး၏ အခြေအနေ ဟုတ်-ရင်ဟုတ်၏။ မဟုတ်ရင်-မဟုတ်ဟု ပြောဆိုရဲရမည်။ စည်းမဲ့ ကမ်းမဲ့ နေထိုင်ခြင်း၊ ၀က်သိုက်၊ ကြက်သိုက်ကဲ့သို့ နေထိုင်ခြင်းမျိုး မဖြစ်သင့်ပါ။
ရဟန်းဖြစ်လိုသော သူသည် ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့ကာ သပ်သပ်ရပ်ရပ် ၀တ်စားဆင်ယင်မှုမျိုး ရှိရပါမည်။ Drinking-Woman-Money နောက်လိုက်ခြင်းမျိုး မဖြစ်ရပါ။
ပျိုးခင်းတာဝန်ခံနှင့် ပျိုးပင်များ ရင်းရင်းနှီးနှီး ဆက်ဆံပြောသော်လည်း အမြင်စောင်းသူများရှိ၏။ (မာကူး-၁၉း၄၅) ၌ "လူသားသည် သူတစ်ပါးကို စေခိုင်းခြင်း ငှာကြွလာသည် မဟုတ်ဘဲ၊ အစေခံခြင်းငှါ ကြွလာသည်"ဟု မိန့်တော်မူထား၏။ အနာဂတ်အတွက် ပုံသွင်းလေ့ကျင့်ရာ ဘုရားသခင်နှင့် လူသားများကယ်တင်ရေးအတွက် ရဟန်းကောင်းများ ပေါ်ထွက်ရေးအတွက် အားကုန်ပင်ပန်း ကြိုးစားလျက်ရှိကြောင်း ရေးသားလိုက်ရပါသည်။
Posted by Archdiocese Of Mandalay Blog at 6:04 AM
ယခုအခါမှာ အာရှဒေသတစ်ခုလုံးက အမျိုးသမီး အများစုအတွက်ကတော့ လက်ထပ်ဖို့ဆိုတာ ဘ၀ရဲ့ပထမဦးစားပေး ရမဲ့ကိစ္စလည်း မဟုတ်တော့ပါ။ အိုးနဲ့အိမ်နဲ့ လူအဖွဲ့အစည်းမှာ နေထိုင်ဖို့အတွက် နောက်ဆုံး အားထားစရာကိစ္စလည်း မဟုတ်တော့ပါ။ လက်ထပ်ခြင်းဆိုတာ ဘ၀နေထိုင်နည်း တစ်မျိုးအဖြစ် ရောက်စပြုနေပါပြီ။ လိုအပ်ချက်တစ်ခုတော့ မဟုတ်တော့ပါ။ ရွေးချယ်စရာတစ်ခုသာ ဖြစ်တယ်လို့ အမျိုးသမီး အများစုက ဆိုကြပါတယ်။ အမျိုးသမီးအများစုဟာ တစ်နေ့မှာ လက်ထပ်ကြမှာ ဖြစ်ပေမဲ့ သူတို့စိတ်ကြိုက် သူတို့ ဖန်တီးယူကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ကိုယ်ရေ အမျိုးသမီးတွေ အားလုံး အိမ်ထောင်ပြုခြင်းနဲ့ သားသမီးမွေးဖွားခြင်းဆိုတဲ့ ကိစ္စတွေကို သူတို့လုပ်စရာ အလုပ်တွေရဲ့ နောက်ဆုံးနေရာမှာ ထားကြတာတော့ မဟုတ်ပါ။ တချို့အမျိုးသမီးတွေက သူတို့ရဲ့ ချစ်သူအမျိုးသားတွေနဲ့ မှန်မှန်Dateလုပ် ကြတယ်။ တချို့ကတော့ သူတို့ရဲ့ဖူးစာ ရှင်ကို Bus ကားမှတ်တိုင်မှာ တန်းစီစောင့်ရင်းနဲ့ပဲ တွေ့လေမလားဆိုပြီး စောင့်စားမျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ တချို့ကျတော့လည်း သတင်းစာကြော်ငြာတွေမှာ ကံစမ်းကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်ကိုယ်ရေ အမျိုးသမီးတွေထဲက အနည်းစုကသာ အိမ်ထောင်ရေးအတွက် တွေးပူပြီး ညည အိပ်မပျော်နိုင်အောင်ဖြစ်နေကြပါတယ်။
ယောင်္ကျားရှိရှိ မရှိရှိ သူတို့ဘ၀က ပြည့်စုံတယ်ဟု ဆိုကြပါတယ်။ တစ်ကိုယ်ရေ အမျိုးသမီးတွေမှာ တူညီတဲ့အချက် ကလေးတွေရှိကြတာက အထက်တန်းပညာ တွေတတ်တာ၊ အောင်မြင်တဲ့ အလုပ်အကိုင် တွေရှိနေတာနဲ့ မာနရှိတာစတဲ့အချက်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့တတွေအတွက်တော့ အသက်(၃၀-၃၅)နှစ်လောက်ထိ အပျိုကြီး ဖြစ်နေရတာ ရှက်စရာကိစ္စတစ်ရပ် မဟုတ်တော့ပါဘူး။ ဂုဏ်သိက္ခာတစ်ခုအဖြစ်နဲ့ တောင် သဘောထားနေကြပါပြီ။ တချို့ကတော့ ခေတ်မီတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။
တစ်ကိုယ်ရေအမျိုးသမီးတွေ အားလုံးဟာ အလုပ်ကြိုးစားကြတယ်။ ခရီးသွားကြတယ်။ လွတ်လပ်တယ်။ သူတို့ စိတ်မ၀င်စားတဲ့၊ အထင်မကြီးတဲ့ ယောင်္ကျားမျိုးနဲ့ ဘယ်တော့မှ လက်ထပ်ကြမှာ မဟုတ်ပါ။ သူတို့ပြောလေ့ရှိတာက ယောင်္ကျားကောင်း တစ်ယောက်ဆိုတာ မိန်းမနဲ့ခြေလှမ်းညီပြီး မိန်းမရဲ့ခြေမကို တက်မနင်းတဲ့ လူဖြစ်ရမယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ ဒီလို အမျိုးသမီးများ သူတို့လိုချင်တာက အဖေါ်ဖြစ်ပါတယ်။ အုပ်ထိန်းသူကို လိုချင်တာမဟုတ်ဘူး။ ဒီလိုယောင်္ကျားမျိုး ရှားတယ်လို့လည်း ပြောတတ်ကြပါတယ်။ တချို့ကတော့ အောင်မြင်တဲ့ အိမ်ထောင်ရေးဆိုတာ အင်မတန်နည်းပါတယ်၊ ဒါကြောင့် သူတို့အနေနဲ့ အလကားအချိန်ကုန်ခံပြီး ရှာမနေပါဘူး လို့ပြောကြပါတယ်။
တစ်ချို့ တစ်ကိုယ်ရေအမျိုးသမီးများ ဆိုကြတာက အိမ်ထောင်ရေးဆိုတာ ဘ၀မဟုတ်ပါ၊ ပြဿနာတွေပါလို့ ဆိုတယ်။ အပျိုကြီး လုပ်နေတဲ့သူများကို တစ်ချို့ကတော့ အထီးကျန်နေရတဲ့ ဒုက္ခထက် ပိုဆိုးပါတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ အပျိုကြီး အယူအဆတွေကို တစ်ချို့က ထုံးစံဖျက်တာလို့ ရှုံ့ချကြပါတယ်။ အတွေးအခေါ်တွေ ပြောင်းလဲ တိုးတက်နေကြပြီလို့ဆိုပေမဲ့ အမျိုးသမီးဆိုတာ ဇနီး၊ မယားဖြစ်ရမယ်၊ မိခင်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆတွေ လွှမ်းမိုးနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ မိသားစုနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကနေ အမျိုးသမီးတွေကို အိမ်ထောင်ပြုဖို့ အမြဲတမ်း ဖိအားပေးလေ့ရှိပါတယ်၊ အများစုက နောက်ဆုံးလိုက်နာ သွားကြပါတယ်။ သမီးတွေ ဘာကြောင့် အိမ်ထောင်မပြုချင်တာလဲဆိုတာကို ဖခင်တွေထက် မိခင်တွေက ပိုနားလည်ကြပါတယ်။ အိမ်ထောင် တစ်ခုလုံးရဲ့ တာဝန်ကိုအမျိုးသမီးတွေကချည်း ဒိုင်ခံယူနေကြရတာ မဟုတ်ပါလား။ တစ်ချို့နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင် အမျိုးသမီးတွေဟာ ယောင်္ကျားရဲ့ တာဝန်အပြင် ယောက္ခမကြီးတွေရဲ့ တာဝန်ကိုပါ ယူကြရပါတယ်။ သားသမီးတွေရဲ့ တာဝန်ကျတော့လည်း ဇနီးမယားရဲ့ တာဝန်သာ ဖြစ်ပြန်တယ်။
ကိုးရီးယားနိုင်ငံမှာ တချို့က အမျိုးသမီးတွေ အိမ်ထောင်မပြုဘဲနေတာ၊ သားသမီးယူဘဲနေတာကို သဘောမကျကြပါဘူး။ အမျိုးသမီးတွေအိမ်ထောင်ရေး တာဝန်ကို ရှောင်ကွင်းတာဟာ သားသမီး မွေးဖွားဖို့ ရှောင်ကွင်းတာနဲ့ ထပ်တူကြောင်း လူလောကကြီး မျိုးဆက်ပြတ်သွားစေမဲ့ အန္တရာယ်ရှိတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ ဒီအချက်ကို တချို့နိုင်ငံအစိုးရတွေကလည်း စိုးရိမ်ကြပါတယ်။ ဂျပန်နဲ့ထိုင်ဝမ်မှာဆိုရင် ဒီပုံသဏ္ဍာန်ဟာ တော်တော်ကြီးသိသာထင် ရှားနေပါတယ်။ စင်္ကာပူနဲ့မလေးရှားမှာတော့ ပြောင်းလဲမှုက ပိုထင်ရှားပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့လူမှုဖူလုံရေး ၀န်ကြီးဌါနက ၁၉၈၀ ပြည့်နှစ် နောက်ပိုင်းကာလမှာ မွေးဖွားတဲ့မိန်းကလေး (၇) ယောက်မှာတစ်ယောက်ဟာ အိမ်ထောင် မပြုဘဲနေလိမ့်မယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ လက်ရှိကလေးမွေးဖွားနှုန်းဟာ ဒီအတိုင်းသာရှိနေမယ်ဆိုရင် နောက်ရာစုနှစ်အကုန်လောက်ရောက်တဲ့အခါမှာ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ လူဦးရေဟာ အခုရှိနေတာရဲ့ တ၀က်သာရှိတော့မယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါ တယ်။ ဒီအန္တရာယ်ကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် အစိုးရက နေ့ကလေးထိန်းဌါနတွေ တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်ဖို့ ဒေါ်လာ ၅၃၆ သန်း သုံးစွဲပြီး ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ တချို့မြို့တွေမှာ ဆိုရင် လူငယ်အိမ်ထောင်သည်တွေအတွက် အိမ်ခန်းတွေ ဦးစားပေး ရောင်းချတာတို့၊ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် ပေးတာတို့ ပြုလုပ်ပေးပါတယ်။
စင်္ကာပူအစိုးရကတော့ အောင်သွယ်လုပ်ငန်းတွေ ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ဌါန တစ်ခုဖွင့်လှစ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်သမား မိခင်တွေအတွက် ကလေးပြုစု စောင့်ရှောက်စရိတ် ထုတ်ပေးတာတို့၊ ကလေးအတွက် အခွန်လျှော့ပေါ့ခွင့်ပေးတာ တို့လည်း လုပ်ပေးနေပါတယ်။ အခွင့်အရေး သာတူညီမျှရရှိရေး ကော်မရှင်အကြီးအကဲ "ဖန်နီချောင်း"ပြောတာက အလုပ်လုပ်တဲ့ အမျိုးသမီးများဟာ နိုင်ငံကြွယ်ဝချမ်းသာ လာဖို့အတွက်အရေးပါတဲ့ ကဏ္ဍကပါဝင်ခဲ့ကြကြောင်း၊ သူတို့ကို ရှုတ်ချမဲ့အစား ကျေးဇူးတင်ဖို့ ကောင်းကြောင်း အမျိုးသမီးတွေ အိမ်ထောင်မပြုဘဲနေကြတဲ့ အဓိက အကြောင်းတစ်ရပ်ကတော့ လုပ်ငန်းမှာ ပိုအောင်မြင်တဲ့အတွက်လို့ ဆိုလိုပါတယ်။
မလေးရှား အမျိုးသမီးစီးပွါးရေး လုပ်ငန်းရှင်များရဲ့နာယကဖြစ်သူ "စကီဇာဘာမက်"ကလည်း တစ်ကိုယ်ရေအမျိုးသမီးများဟာ သူတို့ရဲ့ အလုပ်ကိုဂရုစိုက်ပြီး အလေးအနက်ထားကြောင်း၊ သူတို့အဖို့ Date လုပ်မယ့်အချိန်ဆိုတာ စိတ်ကူးထဲတောင် မထည့်ကြတော့ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားပါတယ်။
ကွာလာလမ်ပူမြို့တော်က ပုံနှိပ် ထုတ်ဝေရေးနဲ့ လူထုဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီကြီးရဲ့ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး အသက် (၃၀) အရွယ်ရှိတဲ့ "ခုတော့ဟဒ်"ပြောတာက အခုချိန် သူအဓိက စဉ်းစားနေတာဟာ စိးပွားရေးဖက်စပ် လုပ်ဖို့ဝါသနာဖြစ်ပါသတဲ့။ ပါတနာကောင်း တစ်ယောက်ရဖို့ဖြစ်ပြီး၊ ယောင်္ကျားကောင်း တစ်ယောက်ရဖို့ မဟုတ်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ (၁၀) ရာစုနှစ်တစ်ခု လောက်အထိအချိန်ဆိုတာ အမျိုးသမီးတွေ ဖြုန်းနိုင်တဲ့ ဇိမ်ခံ ပစ္စည်းတစ်ခုလိုဖြစ်နေပါတယ်။ ရှေးထုံးကတော့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက် အသက် (၂၅) နှစ်ကျော်လာပြီဆိုရင် ကမန်းကတန်း အိမ်ထောင်ပြုကြရတယ်။ အသက်ကြီးလာလေ သတို့သားရဲ့ အရည်အချင်းကိုလျှော့ပြီး တောင်းဆိုလာ ကြရလေဖြစ်သည်။ အခုအခါမှာတော့ ဒီလို မဟုတ်တော့ပါ။ အမျိုးသမီးတွေဟာ အသက် (၂၅) နှစ်ပဲဖြစ်ဖြစ် (၃၅) နှစ်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် သတို့သားရှိရမဲ့ အရည်အချင်းကို လျှော့ပစ်မှာမဟုတ်ဘူး။ သူတို့ဆန္ဒကိုတော့ မစွန့်ဘဲ သတို့သားကိုသာ စွန့်ချင်စွန့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုရီးယားစာရေးဆရာတစ်ဦး ဖြစ်သူ "ယီ"က ဒီလိုရေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ "ပျားများ၏ အဖွဲ့အစည်းသည် အကောင်းဆုံး အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ကြောင်း၊ ပျားအဖွဲ့အစည်း၌ ဘုရင်မမှလွဲ၍ ကျန်ပျားတိုင်း အလုပ်လုပ်ကြရ၍ သားဖွားတာဝန်ယူသည့် ပျားကို ဘုရင်မနေရာမှာထားသည်ကို ၎င်းင်းအနေနှင့် သဘောကျကြောင်း အမျိုးသမီးများသည် ဘုရင်မ ဖြစ်နိုင်သည့်လမ်းကြောင်းကို စွန့်ပြီး အဘယ့်ကြောင့်လုပ်သား ပျားများ ဖြစ်ချင်သည်ကို နားမလည်နိုင်ပါ"လို့ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ စာရေးဆရာ "ယီ"လိုပဲ မိဘတော်တော်များများကလည်း ခုခေတ် အသက် (၂၀) တစ်ကိုယ်ရေအမျိုးသမီးများကို နားမလည်နိုင်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ အိမ်ထောင်ပြု သားသမီးတွေပွားစည်းမှ အိုမင်းတဲ့အခါ စိတ်အေးရမှာပေါ့လို့ ပြောကြပါတယ်။ လူ့အဖွဲ့အစည်း တည်တံ့ခိုင်မြဲဖို့အတွက် အမျိုးသမီးတွေဟာ ကလေးမွေးတဲ့ တာဝန်ကိုယူရမယ်လို့ ပြောတတ်ကြပါတယ်။ အခုဆိုရင် အာရှဒေသက အစိုးရ တော်တော်များများကလည်း ဒီလိုစကားမျိုးကို ပြောနေကြပါတယ်။ သူတို့ ဒေသတွေမှာ ဖခင်အိုကြီးတွေက အစိုးရအဖွဲ့ကို ခေါင်းဆောင်နေကြရတာများလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေကတော့ လူ့ အဖွဲ့အစည်းဟာ အမျိုးသမီးကို ကလေးမွေးဖို့ကိစ္စထက် ပိုပြီး အားကိုး အားထားပြုနိုင် ပါတယ်လို့ပြောကြပါတယ်။ တကယ်လည်း အားကိုး အားထားပြုနိုင်တယ်ဆိုတာ သူတို့က လက်တွေ့ပြနေကြကြောင်း တင်ပြလိုက်ရင်း ၂၁ ရာစု အာရှအမျိုးသမီးများနဲ့ သူတို့ရဲ့ အိမ်ထောင်ရေးအပေါ်ခံယူထား ရှိတဲ့အမြင် တစေ့တစောင်းကို တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
Posted by Archdiocese Of Mandalay Blog at 5:16 PM
အကြီးအကဲကလည်း ရှောရှောရှူရှူပဲ ခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘုရားရှင်ရဲ့စီမံကိန်းမှာတော့ အန်ထော်နီဟာ အီတလီနိုင်ငံနဲ့ ပြင်သစ်နိုင်ငံတွေမှာ သာသနာပြုဖို့နဲ့ အဲဒီမှာ ၀ိညာဉ်အတော်အများကို ဘာသာတရားဖက်မှာ ဆွဲဆောင်နိုင်မဲ့အကြောင်း ဖြစ်ပါတယ်။
အန်ထော်နီဟာ အာဖရိကတိုက် ကိုရောက်တာနဲ့ ငှက်ဖျားမိလေရော၊ ဘာဆေးသောက်လို့မှ မသက်သာတဲ့အဆုံး တပ်ခေါက် ပြန်ခဲ့ရပါတော့တယ်။ အပြန် လမ်းမှာတော့ အန်ထော်နီစီးလာတဲ့ သင်္ဘောဟာအီတလီပြည် "စီစီလီကျွန်း"နား အရောက်မှာ ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အန်ထော်နီဟာစီစီလီကျွန်းမှာ သောင်တင်ခဲ့ပါတော့တယ်။ အဲဒီမှာ ခေတ္တနားနေရင်း စိန်ဖရန်စစ်က သူ့အသင်းရဲ့ ဂိုဏ်းလုံးကျွတ်အစည်းအဝေးကြီးကို အစီစီမြို့မှာ ကျင်းပတာနဲ့ကြုံခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် စိန်အန်ထော်နီဟာ အခြားအဖေါ်တွေနဲ့ အတူ အစီစီမြို့ကို ခရီးဆက်လိုက်တယ်။ အဲဒီအစည်းအဝေးကြီးကနေ ရသေ့အချို့ကို အပြောင်းအရွေ့လုပ်ခဲ့တယ်။
ဒါကြောင့် စိန်အန်ထော်နီဟာ မွန်တေပါအိုလိုမြို့ကို စေလွှတ်ခံခဲ့ရတယ်။ အဲဒီမှာ စိန်အန်ထော်နီဟာ ကိုရင်ကြီးများအတွက် နေ့စဉ်မစ္ဆားပူဇော်ပေးခဲ့ရတယ်။ သူ့ကိုသူ ဘာမှအသုံးမကျတဲ့သူ၊ လူဖျင်းတစ်ယောက်လို့ ယူဆခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် ရသေ့ကျောင်းရဲ့ အောက်ချေသိမ်းအလုပ်တွေကို ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ပဲ ဒိုင်ခံလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကြမ်းတိုက်၊ တံမြက် စည်းလှည်းခြင်း၊ ဖုန်သုတ်၊ ပန်းကန်ဆေး၊ အလုပ်တွေပေါ့။ ဒါပေမဲ့လို့ အန်ထော်နီဟာ သူ့ရဲစိတ်ပညာကို ဘယ်တော့မှထင် ထင်ပေါ်ပေါ်မပြဘူး။ ဒါမှလည်း အဖော် ရသေ့တွေဟာ သူ့ကိုပညာမတတ်သူ၊ ရိုးရိုးသားသားနဲ့ ဘုရားတရားကြည်ညိုသူလို့ ယူဆကြမှာဖြစ်တယ်။ သူဟာ တစ်ကျောင်းလုံးရဲ့ အောက်ခြေသိမ်းအလုပ်တွေကို တစ်ယောက်ထဲ သိမ်းကြုံးလုပ်လေ့ရှိတယ်။ အဲဒါဟာ အန်ထော်နီအကြိုက်ပဲ။ သူ့ကိုပညာ မတတ်သူ၊ အသုံးမကျသူလို့ ထင်ခံရလေ၊ အကြိုက်တွေ့လေပဲ။ သူ့ကိုချီးမွမ်းတာ၊ မြှောက်စားတာကို သူနှစ်မသက်ဘူး။
အဲဒီအချိန်လောက်မှာ ဖရန်စစ် စကင်ရသေ့အများပိုင်းကို ရဟန်းသိက္ခာ ခံယူဖို့ဆရာတော်ကြီးဖိုလီ(Foli)ဆီ စေလွှတ်ခဲ့တယ်၊ ဒိုမီနီကန်ရသေ့ တချို့ လည်းပါဝင်ခဲ့ကြတယ်။
အန်ထော်နီဟာ သူ့အကြီးအကဲနဲ့အတူ ဒီသိက္ခာတင်ပွဲတော်ကြီးကို အဖော်အဖြစ် လိုက်ပါခဲ့ပါတယ်။ အကြီးအကဲတွေက ဒိုမီနီကန်ရသေ့တစ်ပါးပါးကို ဒီရဟန်း သိက္ခာတင်ပွဲတော်မှာ သြ၀ါဒပေးဖို့ တောင်းဆိုခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်သူမှကြို တင်မပြင်ဆင်ခဲ့ကြလို့ အသည်းအသန် ငြင်းပယ်ခဲ့ကြတယ်။ ဒါကြောင့် နောက်ဆုံး တော့အကြီးအကဲက အန်ထော်နီကို "ကဲ အန်ထော်နီရေ၊ မင်းပဲ သန့်ရှင်းသော ၀ိညာဉ်တော်ဘုရားရဲ့လှုံ့ဆော်သမျှကို ပြောပေရော့" လို့ တာဝန်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒါကတော့ သူ့ရဲ့နှိမ့်ချခြင်းပါရမီကို စမ်းသပ်လိုက်သလိုပါပဲ။ စိန်အန်ထော်နီဟာလည်း နာခံခြင်းအပြည့်အ၀နဲ့ အကြီးအကဲစေခိုင်းချက်ကို ကျိုးကျိုးနွံနွံနဲ့ လက်ခံခဲ့တယ်။
စိန်အန်ထော်နီရဲ့ သြ၀ါဒဟာ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပါ။ စိန်အန်ထော်နီဟာ သမ္မာကျမ်းစာတွေကို လေးလေးနက်နက်နဲ့အဓိပ္ပါယ် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဟောနိုင်၊ ပြောနိုင်လို့ တရားနာပရိသတ်တွေအားလုံး ဟာ တအံ့တသြနဲ့မိန်းမောတွေဝေသွားစေ ခဲ့တယ်။
အဲဒီသြ၀ါဒကို လက်တန်းပြော တယ်ဆိုရင်ဘယ်သူမှ ယုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ဘူး။ သေသေချာချာကျကျနနပြင်ဆင်ပြီး ပြောရင်တောင် ဒီလောက်ကောင်းမှာမ ဟုတ်ပါဘူး။ အန်ထော်နီဟာပါမွှား ရသေ့တော့မဟုတ်ဘူး။ ၀ိညာဉ်တော်ဘုရားရဲ့ အသုံးပြုခြင်းခံရသူ တစ်ဦးဆိုတာ ပိုပြီးနား လည်သဘောပေါက်လာကြပါတယ်။
အဲဒီသိက္ခာတင်ပွဲကြီး နောက်ပိုင်းမှာတော့ အကြီးအကဲက စိန်အန်ထော်နီကို မီးဖိုချောင်မှာ မ၀င်ခိုင်းတော့ဘူး။ အဲဒီ တနယ်လုံးမှာ တရားလှည့်လည်ဟောဖို့ အထူးတာဝန်တစ်ရပ်အနေနဲ့ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအလုပ်သာလျှင် သူနဲ့ကိုက် ညီတဲ့အလုပ်ဆိုတာကိုလည်း သိလာကြတော့တယ်။ စိန်အန်ထော်နီတရားဟော ကောင်းကြောင်းတွေ၊ သူဟောလိုက်ရင် တရားနာပရိသတ် တစ်ထိုင်တည်းတရား ကျသွားတာတွေ၊ အကျင့်ပြောင်းသွားတာတွေ၊ အကျွတ်တရားရသွားတာတွေကို ကြားရတော့ စိန်ဖရန်စစ်က ဘာပွဲရှိရှိ၊ ဘာ အခမ်းအနားရှိရှိ စိန်အန်ထော်နီကိုပဲ ဟော ခိုင်းပြောခိုင်းပါတော့တယ်။
"တရားဟောပြီး သာသနာပြုသူ" Appostolic Preacher
အခုအချိန်မှာတော့ စိန်အန် ထော်နီဟာ သူ့ဘ၀ကို တရားဟောခြင်း အမှုမှာ လုံးလုံးကြီးမြှပ်နှံလိုက်ပါတော့တယ်။ လူတွေအုပ်စုလိုက်ချီပြီး သူ့တရားဒေသနာတော်ကို လာရောက်နာယူကြပါတယ်။ သူ့ရဲ့တရားဒေသနာတော်တွေ လာရောက်နာယူကြသူတွေကိုလည်း ဘုရား ရှင်ဟာ ထူးဆန်းအံ့သြဖွယ် တန်ခိုးလက္ခ ဏာများဖြင့် ပံ့ပိုးပေးခဲ့ပါတယ်။
တစ်ခါတုန်းက စိန်အန်ထော်နီရဲ့ တရားပွဲကိုသွားရောက်နာယူမဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို ဘုရားတရားမရှိတဲ့သူ့ခင်ပွန်းက တားဆီးပိတ်ပင်ကာ ခွင့်မပြုခဲ့ဘူး။ ဒါကြောင့် ဒီအမျိုးသမီးဟာအိမ်ရဲ့အပေါ် ထပ်ကိုတက်ကာ စိန်အန်ထော်နီရှိတဲ့ အရပ်ဘက်က ပြတင်းပေါက်နားမှာ ထိုင်ခုံ တစ်လုံးနဲ့ထိုင်ပြီး တရားနာယူခဲ့သတဲ့။ သူ့အိမ်နဲ့ စိန်အန်ထော်နီတရားဟောတဲ့ နေရာဟာ လေးမိုင်လောက်ဝေးခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီအမျိုးသမီးဟာ သူ့အိမ်ပြတင်း ပေါက်ကနေ တရားနာနေသော်လည်းပဲ စိန်အန်ထော်နီဟာ သူ့အနီးအနားမှာ ရပ်ပြီးတရားဟောနေသလို၊ တရားဟောချက် အားလုံးကို ကြည်ကြည်လင်လင် ပြတ်ပြတ် သားသားကြားရသတဲ့။ ဒါကြောင့် အဲဒီ အမျိုးသမီးဟာ သူ့ယောက်ျားကိုအကျိုး အကြောင်းပြောပြတော့ သူ့ယောက်ျား ကိုယ်တိုင်အပေါ်ထပ်တက်ပြီး တရားနာ ကြည့်သတဲ့။
သူ့မိန်းမပြောတဲ့အတိုင်း စိန်အန် ထော်နီအသံကို ပြတ်ပြတ်သားသားကြားရသတဲ့။ အဲဒီနောက်မှာ အဲဒီအမျိုးသားလည်း ဘာသာထဲဝင်လာပါတော့တယ်။
နောက်ထပ် အမျိုးသမီးကြီးတစ်ဦး ကတော့ စိန်အန်ထော်နီရဲ့တရားနာချင်လွန်းလို့ သူ့ရဲ့နို့စို့ကလေးလေးကို အိမ်မှာ တစ်ဦးတည်း သိပ်ထားခဲ့ပြီး တရားနာခဲ့သတဲ့။
အဲဒီလို စိန်အန်ထော်နီရဲ့တရားကို လာရောက်နာယူနေတဲ့အချိန်မှာအိမ်က ကလေးဟာ ဆော့ရင်းနဲ့ ရေနွေးအိုးထဲကျ သွားသတဲ့။ ထုံးစံအတိုင်းကတော့ ပွက်ပွက်ဆူတဲ့ ရေနွေးအိုးထဲကျသွားတဲ့ ကလေးရဲ့အသက်ဟာ ဘယ်နည်းနဲ့မှပြန်ရှင်လာနိုင်စရာ အကြောင်းမရှိဘူး။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီ အမျိုးသမီးဟာ စိန်အန်ထော်နီတရားကိုနာ ပြီးပြန်လာတော့ သူ့ရဲ့ရင်သွေးဟာ ပွက်ပွက်ဆူနေတဲ့ ရေနွေးအိုးထဲမှာ ရေအေးနဲ့ ကစားနေသလို ဘာဝေဒနာမှမခံစားရဘဲ ရေနွေးနဲ့ဆော့နေတာကိုတွေ့ရသတဲ့။
တတိယအမျိုးသမီးကြီးကတော့ စိန်အန်ထော်နီရဲ့တရားကိုနာပြီး အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ပုခက်ထဲက ကလေးဟာ အသက်မရှိတော့တာကို တွေ့လိုက်ရတယ်။ ဒီအမျိုးသမီးကချက်ချင်းပဲ အန်ထော်နီဆီ ပြန်ပြေးလာကာ အကူအညီတောင်းခဲ့တယ်။ အန်ထော်နီကလည်း ခရစ်တော်က လူတစ်ရာတပ်မှူးကိုပြောလိုက်သလို "အိမ်ကို အမြန်သာသွားပါ၊ သင့်သားငယ် မသေပါဘူး "လို့ပြောလိုက်တယ်။
ဒီအမျိုးသမီးဟာလည်း စိန်အန်ထော်နီပြောသမျှကို တထစ်ချယုံကြည်ပြီး အိမ်ပြန်သွားခဲ့တယ်။ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ သူ့ရဲ့ကလေးငယ်ဟာ အခြားကလေးဖော်တွေနဲ့ ဆော့ကစား နေတာကို တွေ့ရသတဲ့။
အန်ထော်နီရဲ့တန်ခိုးလက္ခဏာ အများပိုင်းဟာ သူတရားဟောနေတာနဲ့ ဆက်စပ်လျက်ရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ငါးတွေကို တရားဟောတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ (၁၂၂၇) ခုနှစ်မှာ စိန်အန်ထော်နီဟာ နေရာအနှံ့ကိုလိုက်ပြီး တရားဟော တဲ့အခါမှာ ရိုမီနီဆိုတဲ့မြို့တစ်မြို့ကို ရောက်သွားသတဲ့။ အဲဒီမြို့သားတွေဟာ အသင်းတော်ကိုဆန့်ကျင်ပြီး အခြားဘက်ကိုစိတ် အားထက်သန်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။
Posted by Archdiocese Of Mandalay Blog at 4:26 AM
မင်းမှာ ... ပညာရှိလို့လား ?
------ ရှိလို့လား ?
------- ရှိလို့လား ?
ဒီတော့ ... တဒင်္ဂတိုင်းတွင်